Ama-Ellicott Dredges angama-8 avimbela izikhukhula eVeracruz, eMexico
Izimvula ezinamandla esifundazweni saseVeracruz, eMexico phakathi kukaSepthemba no-Okthoba we-2010 kuholele ekuchichimeni kwemifula yeJamapa neCotaxtla. Lokhu kudale izikhukhula kanye nomonakalo omkhulu ezindaweni eziseduzane ezisedolobheni, ikakhulukazi komasipala baseMedellin naseBoca del Rio, eningizimu yedolobha laseVeracruz, eGulf of Mexico. Ibhekene nalesi simo, i-National Water Commission yaseMexico (i-CONAGUA) yanquma ukwenza umsebenzi ophuthumayo ngenhloso yokuhlanza, ukusika izigaqa kanye nokuvikela ezinye izikhukhula kuleyo mifula. Le projekthi, efaka imisebenzi kuma-12kms asemanzini womabili, iCONAGUA inezinkontileka ezihlukile zokuhlukanisa izinkampani ezinolwazi oluningi.
Iphrojekthi ibidinga inani lama-cutter suction dredges aphelele. Wonke ama-dredges akhiqizwa yi-Ellicott Dredges futhi afaka:
Amamodeli amane (4) edonsa imodeli 670, ngepompo le-14 ”ne-800 HP yamandla afakiwe
Amathathu amathathu (3) edonsa imodeli 370, ngepompo le-12 ”ne-440 HP yamandla afakiwe
Eyodwa (1) imodeli yokudonsa 460SL, ene-12 ”iphampu, i-440 HP yamandla afakiwe ngokuphelele kanye nohlelo“ lokufaka isitebhisi ”.
Lokhu bekuyiphrojekthi ebucayi yezizathu eziningi njengoba bekuphoqa abasebenza kule dredge ukuthi babhekane nezinselelo eziningi. Eyokuqala kwakuwukuphuthuma komsebenzi, ukuvimbela omunye umcimbi wezikhukhula. Bekubalulekile ukusebenzisana nosonkontileka abanolwazi besebenzisa ama-dredges anamandla nangokufanele Imifula yeJamapa neCotaxtla inemisinga eqinile, okwenze ukuthi umsebenzi we-dredging ube nzima ngokwengeziwe futhi kudinga ukusetshenziswa kwemishini eqinile. Ngaphezu kwalokho, yomibili le mifula yayinenqwaba yemfucumfucu nemfucumfucu, nayo okwakumelwe isuswe. Enye inselelo yephrojekthi ehlobene nokufinyelela emifuleni, okwenze kwaba nzima kakhulu ukuthutha nokubeka izindawo ezazikhona.
Ukudilizwa kwenziwa ngemuva kwezidingo zesiteshi ezinqunywe yiCONAGUA, yehla yaya ekujuleni kwe-5m. Ukudilizwa kwenziwa ngemuva kwemithetho yezemvelo yi-Mexican Environmental Agency (SERMANAT). Izinto ezibunjiwe zazihlanganisa isihlabathi, amatshe nobumba. Lokhu okubekiwe kufakwe ezindaweni eziqokiwe ezizosetshenziswa kamuva ngezinhloso ezahlukahlukene.
Naphezu kobunzima, izinjongo zephrojekthi zihlangabezwane ngempumelelo. Ezinyangeni ze-10, ama-dredges asuse inani elilinganisiwe lamamitha ayi-2 ama-cubic wezinto ezisikiwe emifuleni futhi adala isiteshi esinqunyelwe Imiphumela yephrojekthi ibe mihle kakhulu; ubufakazi balokhu ukuthi kuze kube manje, azikho ezinye izehlakalo zesikhukhula ezenzekile kule ndawo.
Iqiniso lokuthi u-Ellicott wenza yonke imigoqo esetshenziselwe le projekthi ayizenzekeli ngengozi. Ngaphezulu kweminyaka ye-125 embonini, u-Ellicott ungumholi ekuklameni nasekwenziweni kwama-cutter suction dredges. Ama-dredges e-Ellicott ayaziwa ngokuba nekhwalithi ephezulu kakhulu futhi ngokuba namandla kakhulu futhi ahlala isikhathi eside. U-Ellicott ugcina isitokhwe saphakade kumamodeli wayo we-dredge - into ebaluleke kakhulu uma kukhulunywa ngamaphrojekthi eziphuthumayo anjengale. Ngaphezu kwalokho, u-Ellicott ugcina ubukhona obuqinile emakethe yaseMexico ngokusebenzisa iMisis SA yommeleli wasendaweni, ngensimu yasendaweni yasendaweni kanye nokutholakala kwezingxenye ezithile.